स्कुलमा छात्राहरुले अनिवार्य सेतो भित्री वस्त्र लगाउनुपर्ने नियम, शिक्षिकाले जाँच गर्छन् ! – Dailny NpNews
स्कुलमा छात्राहरुले अनिवार्य सेतो भित्री वस्त्र लगाउनुपर्ने नियम, शिक्षिकाले जाँच गर्छन् !
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २२, २०७७ समय: १०:३७:४६
काठमाडौं। विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको लागि निश्चित पहिरन तोकिएको हुन्छ । सर्ट, पाइन्ट वा स्कर्ट, जुत्ता, मोजा, टाइदेखि लिएर स्वेटर वा कोटको रंग र डिजाइन निर्धारित हुन्छ । तर, भित्री वस्त्र पनि अनिवार्य निश्चित रंगकै लगाउनुपर्ने नियम भने हुँदैन । भित्री वस्त्र अनिवार्य रुपमा तोकिएकै रंगको लगाउनुपर्ने नियमबारे सुन्दा हामीलाई अनौठो लाग्छ तर जापानमा भने यो नियम छ ।
न्यूज अन जापानका अनुसार जापानको सागा प्रान्तमा अहिलेसम्म छात्राहरुले अनिवार्य सेतो भित्री वस्त्र लगाउनुपर्ने नियम छ तर अब भने यो नियम हटाइने भएको छ । रिपोर्टका अनुसार सागा प्रान्तको बोर्ड अफ एजुकेशनले त्यहाँका ५१ वटा मिडिल र हाइस्कुलमा अनुसन्धान गराएको थियो । यो अनुसन्धानमा १४ वटा स्कुलमा छात्राहरुको लागि अनिवार्य सेतो भित्री वस्त्र लगाउनुपर्ने नियम रहेको पाइयो । त्यहाँका कैयौं स्कुलहरुमा शिक्षिकाहरुले छात्राको भित्री वस्त्र सेतो छ कि छैन भनेर जाँचसमेत गर्छन् ।
सेतो भित्री वस्त्र नलगाएका छात्राहरुले सजायसमेत पाउँछन् । यो नियमलाई लिएर अभिभावकहरुले आपत्ति जनाउँदै यसलाई निन्दनीय भनेका थिए । यो अत्यन्तै विवादित नियमलाई अब सागा प्रान्तमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । पाजानको क्युसु क्षेत्रको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा सागा प्रान्त छ । रिपोर्टअनुसार अब यहाँ यो नियम अप्रिलको दोस्रो हप्तापछि हटाइनेछ । सागा प्रान्तको बोर्ड अफ एजुकेसनले भित्री वस्त्रका साथमा विद्यार्थीको मोजासम्बन्धी नियम पनि हटाएको छ ।
गत वर्ष फुकोका सहरमा पनि यस्तै अध्ययन गरिएको थियो जहाँ ८० प्रतिशत स्कुलमा यो नियम भएको पाइएको थियो । अध्ययनमा सेतो भित्री वस्त्र नलगाएको भए त्यो भित्री वस्त्र खोल्न नगाइन्थ्यो र नमानेमा विद्यार्थीको ग्रेड घटाइन्थ्यो । यो रिपोर्ट तयार गर्ने अध्ययनकर्ताहरुले जापानका स्कुलमा गोपनीयता र मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको बताएका थिए ।
२३० पटक हेरिएको